Umhlahlandlela wekhibhodi nezincomo zokuhlela zamanje
Qala electronics Umsindo & Hifi Keyboard
Ngenye yezinsimbi ezithandwayo kakhulu ezidlalwa futhi ezizwe emhlabeni jikelele: The Keyboard , Kungakhathaliseki ukuthi ngezikhathi zemikhosi noma wena, abantu bazo zonke ubudala bayothanda ukudlala kule nsimbi yomculo noma bazithokozise nabanye ngamakhono abo. Kungasetshenziselwa ngokuvumelana nezimo ukuzithokozisa kwe-solo noma nezinye izinsimbi eziningana. Okulandelayo kuchaza konke okudingayo ukwazi ngekhibhodi.
1 Incazelo yekhibhodi
7 Imisebenzi ehlukahlukene
8 isigqi amaphethini
11 ihambisana umsebenzi
12 Arpeggio sici
13 I-Pitch Bend
14 Ukuqopha Umsebenzi
17 ukuthenga nenqubo
23 Izinhlobo zamakhibhodi
24 Abakhiqizi abahamba phambili
25 Amanye ama-brand
26 Kusuka lapho ikhibhodi ukudlala ukufunda kungenzeka
Ikhibhodi ibhekwa njengensimbi yekhibhodi yekhompyutha. Uma kuqhathaniswa nezinsimbi zomculo ezinjengamacilongo nama-trombones, kanye nezinsimbi zomculo ezinezintambo, umsindo wale piyano ophefumulayo uvele nje nge-elektroniki. Ngakho, le nsimbi yekhibhodi idinga i-amplifier yomsindo ifakwe izikhulumi. Abahlinzeki abaningi benza ama-loudspeaker ngqo kumakhibhodi abo. Izinhlobonhlobo eziningi nazo zinesikebhe sekhanda. Kukhibhodi, engatholakala futhi kuma-e-pianos nama-pianos, kungenzeka ukushaya amanothi ahlukene namathrekhi. Ikhibhodi iqukethe ukukhethwa okukhulu kwemisindo ehlukene, ukuze ukucindezela izihluthulelo kungekhona nje ukuzwakala umsindo wepiyano, kodwa futhi ukulingisa izinsimbi zomculo, imimoya, amakholita noma amacilongo. Ngaphezu kwalokho, izinguqulo eziningi zinemisebenzi ekhethekile esiza ekufundeni ukudlala ikhibhodi noma ngokuhamba ngokuzenzekelayo lezi zicucu zokudlala zepiyano nezinye izinsimbi. Lekhibhodi inemisindo eminingi ehlukene. Udlala ithuluzi elihambelanayo njengo piyano. Ukhetha umsindo oyifunayo, udlale izingoma ezihlwini bese uzwa umsindo ngokusebenzisa izikhulumi ezihlanganisiwe. Ukucindezela zonke izinkinobho kwikhibhodi ehambelanayo kudala amathoni e-elekthronikhi, futhi lezi zomsindo ezihlukile ziyahlukahluka ku-pitch, njenge piyano.
Amakhibhodi amaningi ahlukaniswe ngezigaba zekhibhodi, izikhulumi kanye nephaneli yokulawula, ezethulwa ngezansi.
Cishe yonke ububanzi bekhibhodi ithatha ikhibhodi. Nazi izihluthulelo ezihlelwe njengepiyano noma ipiyano. Uma kwenzeka ikhibhodi, izihluthulelo zenziwe ngepulasitiki, ukujula nobubanzi bezihluthulelo ezihlukile ekusebenziseni ukwenza. Ezinye izinto zihlanganisa okhiye abathintekayo, ukuze kuthi uma ushaya ikhi kancane ithoni ethule itholakala. Ngokuvamile, ama-pianane anezinkinobho ze-88. Kunamakhibhodi aqukethe izinkinobho ze-49, 61, 76 noma ze-88. Izinsimbi eziningi zekhibhodi ze-MIDI ziqukethe okhiye be-25 kuphela. Inombolo yezihluthulelo kubonisa ukuthi mangaki ama-octaves akhona kukhibhodi ehambelanayo. Ngoba wonke ama-octave anezihluthulelo eziyishumi nambili, isibonelo, insimbi yekhibhodi enezinkinobho ze-61 inezinhlamvu ezinhlanu. Iphiyano yomshini iqukethe okhiye be-88 futhi ngaleyo ndlela ihlanganisa i-octaves ye-7,5. Ngaphandle kwalezi zinhlobonhlobo zekhibhodi nezinkinobho ezivamile, abakhiqizi banokushintshashintsha okulula ngokukhethwa kwekhibhodi ekunikezeni. Iqukethe i-silicone enokuhlwitha nezinkinobho ezimnyama nezamhlophe eziphrintiwe. Izinzwa zibhalisa okuthinta ukhiye. Izitsha zekhibhodi zekhwalithi eliphezulu kakhulu kuphela ezitholakale ngemuva kwesikhathi. Lesi sici senza sikwazi ukuthonya umsindo ngisho nangemva kokuthi okhiye behlulwe.
Cishe ikhibhodi ngayinye inezikhulumi ezimbili ukukhiqiza isithombe somsindo we-stereo. Zibekwa ngabakhiqizi ngaphezulu kwe-instrument yekhibhodi ehambisanayo emikhawulweni emibili. Ngaphezu kwalokho, lezi zinsimbi zomculo zihlanganisa ukukhishwa kwesikrini okuvame ukutholakala ngemuva kwekhibhodi ngayinye. Izipikha zivula ngokuzenzekelayo uma usebenzisa i-headset.
Amakhibhodi anomthombo wokunikezela amandla owenza le nsimbi yomculo. Ezinye izinguqulo zingabuye zisebenze ngamabhethri. Ngaphezu kwalokho, izinsimbi zekhibhodi ebangeni lobuphakathi namanani aphezulu zifaka ezinye izixhumi, njenge-audio, MIDI kanye ne-USB port.
Iphaneli yokulawula itholakala kwikhibhodi ngenhla ngaphezu kwekhibhodi naphakathi kwezikhulumi ezimbili. Ngaphezu kokuboniswa, iphaneli yokulawula inezinkinobho eziningi ongakhetha kuzo imisebenzi nemisindo ehlukene. Ngisho nokulawula ivolumu kufaka abahlinzeki abaningi kule phaneli.
Amakhibhodi anomisebenzi eminingi manje okwethulwa ngabanye.
Cishe ikhibhodi ngayinye iqukethe amaphethini omculo lapho i-tempo ilungiswa khona. Ngalokhu uzwa isigqi samadubhu odlala kuwo ucezu lomculo. Ngaphandle kwama-rock rock kanye ne-pop, i-tango, i-samba, i-swing, i-walt nezinye iziqu ngokuvamile ingakhetha.
Imibala enomsindo yimisindo ehlukahlukene. Lezi ziyatholakala kwikhibhodi. Ngaphandle kwepiyano, i-organ, ipiyano, izinsimbi zekhibhodi zinikeza umsindo olingisa ngokulinganayo izintambo, izinsimbi zomculo, amakholita, amakhoya kanye nezinsimbi ezihlukahlukene zokudlala.
Uma usebenzisa umsebenzi we-metronome, uzozwa ukuchofoza okuqhubekayo okubeka ukushaya. Ikakhulukazi yabaqalayo i-metronome iyasiza ukudlala ngesivinini esivamile.
Uma ufaka isici sokuhambisana, ikhibhodi idlala ngokuzenzekelayo isigqi namanye amazwi, njengama-bass. Lapha, i-othomathikhi yekhibhodi isekelwe ezintweni ezidlalwa umsebenzisi. Ucacisa uhlobo lwesigqi, njenge-pop, i-walt ne-salsa. Ukuhambisana umsebenzi wensimbi yekhibhodi ephakathi nendawo kuvame ukuphindaphinda isilinganiso esisodwa futhi asishintshi kuze kube yilapho enye idlalwa idlala. Izinguqulo eziphezulu zekhwalithi zinikeza ukuhlukahluka okuningi kumdlalo wokuhambisana. Ukuhambisana kusebenza ekugcineni kwakha iqembu lomculo elihambisana nokudlala komuntu siqu. Ikakhulukazi emishadweni kanye neminye imikhosi umuntu uzwa umculi we-solo nalo msebenzi. Inzuzo kakhulu kulo msebenzi ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi sangempela. Isibonelo, ungaphinda uphinde ukhiphe i-chorus njengoba uthanda.
Ubeka phansi ukhiye. Ikhibhodi izodlala ngokuzenzekelayo i-arpeggio, futhi eziningi zazo zingakhetha. I-Arpeggio yenza ukukhala kwezingoma ezihlukahlukene ze-harmonic ngokulandelana okusheshayo. Lokhu kwenza i-arpeggio ithande ukudlala ihabhu.
Ukusebenza kwalo msebenzi kwenzeka ngesondo, okungatholakala ngakwesokunxele kwekhibhodi yekhibhodi. Uma ukhiye uphonswa futhi ugcinwe, lo mgqa ushintshwe ngokushintsha ukudayela phansi noma phezulu. Lokhu kunikeza umdlalo ukwedlula ubuhle.
Umsebenzi wokurekhoda urekhoda umculo odlalwayo futhi ungalalelwa kamuva. Lo msebenzi wekhibhodi uhlobene eduze nememori ekhona. Kwezinye izindlela, kungenzeka ukwandisa umthamo wesitoreji kamuva.
Ngemiphumela umsindo nokudlala izingoma kungashintshwa. Imiphumela eyaziwayo ifaka i-echo (ukubambezeleka) nokubuyisela emuva. Uma usebenzisa iHholo, ithuluzi lekhibhodi lenza ukubonakala kwendawo. Umculo uzwakala njengokudlala ekamelweni elikhulu, njengesonto. Umphumela we-echo wekhibhodi uphinda umsindo odlalwayo.
Ukusebenzisa umsebenzi we-Glide, ithuluzi lekhibhodi lihlanganisa amanothi amabili adlaliwe ngokulandelana. Lokhu kudala ukuguquka okuzungezile phakathi kwemisindo emibili ngayinye.
Okulandelayo kuchaza ukuthi ubheke nini uma uthenga ikhibhodi.
Ukuze ikhibhodi, izinkinobho nezindlu zenziwe nge-plastic. Kusetshenziswe kuphela izindlu zezinsimbi zensimbi ezenziwe ngezinga eliphezulu kakhulu. Kubalulekile ukuthi izihluthulelo azikhombisi ukudlala. Ikhibhodi enhle nayo inikeza umuzwa ngokushesha kulezi zakhi ezakhiwe. Ukuzwela kubalulekile okhiye abathintekayo. Lapha kufanele uhlole ukuthi amanothi athambile futhi athambile kakhulu angadlalwa ngaphandle kwezinkinga. Amacu kanye nezinkinobho kufanele asabele ngokushesha futhi akumelwe agxumeke ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Umsindo udlala indima enkulu hhayi kuphela ku-acoustic kodwa futhi ku-instrument yomculo kagesi. Ngaphezu kwekhwalithi yesizukulwane somsindo, izingcingo zekhibhodi nazo zithonya ikhwalithi yomsindo. Ngakolunye uhlangothi, ukucaca kwephethini lonke elizwakalayo futhi, ngakolunye uhlangothi, ibhalansi yemigqa yezimvamisa ezihambelanayo iyanqunywa kulezi zikhulumi. Kufanele kuhlolwe ukuthi ngabe izindawo eziphakeme, ama-middle and basses zihlobene ngokulinganayo. Ngakho, amandla nezibuthakathaka zezikhulumi zekhibhodi zingabonakala. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwesizukulwane somsindo nge-headphone kunika umbono ongcono.
Ukusingatha isakhiwo semenyu kanye nephaneli yokulawula yezilungiselelo ezahlukene kubalulekile kukhibhodi. Ngakho kubalulekile ukuthi abahlinzeki bahlele ukulawula kwesimbi yekhibhodi ezwakalayo futhi ecacile. Ikakhulukazi uma ukudlala phambi kwabalaleli befuna ukushintshwa nezinkinobho kuvusa amadlingozi. Ukuqondiswa kwemenyu ecacile futhi kunomthelela ekwenzeni ukuthi le nsimbi yomculo ilula ukuyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi kufanele bahlathulule ama-rhythms kanye nama-timbres aqondakalayo ahlanzekile. Ngoba amagama uMerengue, i-Rumba ne-Salsa adlulisa ukucaca okucacile kunemigomo yesiLatin American eyodwa kuya kweyithathu.
Amakhibhodi anemisebenzi eminingi ehlukene. Lapha kunengqondo ukubona ukuthi yimiphi imisebenzi ehlukene, ama-rhythms, timbres nokunye okuningi okutholakala nokuthi ngabe inguqulo ehambelanayo iqukethe ukuhambisana kwezimoto.
Ngezesekeli zethuluzi eliyisihluthulelo umuntu kufanele azibuze yena, zingaki izesekeli ezifakiwe. Zonke izinguqulo zifakiwe ekulethwa kwezidingo, kanti izincwadi zokuzivocavoca azizona ezijwayelekile. Amanye amamodeli afaka isikhwama esikhethekile sekhibhodi.
Kukhona izinsimbi ezihlukahlukene zekhibhodi zabaqalayo, abaphambili nabachwepheshe, njengoba kuxoxwe ngezansi.
Ikhibhodi ye-RockJam 61 ikhiyano yepiyano isetha ukhiye wama-61 wepiyano ikhibhodi ibhentshi ikhibhodi istikha sokuma kwe-headphone kanye nesiboniso sepiyano esilula
61-sekhibhodi yokhiye ngesayizi egcwele, 50 demo iculo, izwi ezimbili, Tempo, transpose, ukusekela, vibrato, Metronome, 7 iphaneli nesigubhu
Ama-timbres we-100, izilinganiso ze-100, izindlela zokulinganisa ze-3, ukulawula okuhambisanayo
Ukubukwa kwe-LCD, irekhodi nokudlala, umsebenzi we-32 washaya ishyindo
Headphone okukhipha, stereo okukhipha, usebenza nge amabhethri (6 x D-usayizi amabhethri, akufakiwe) noma 9VDC ugesi (okufakiwe) ukuyisebenzisa nge umugqa voltage
Ukuma okungaguquguquki kanye nesigqoko esiphezulu nama-headphone kufakiwe.
Ikhibhodi yezinga lokungena inezinhloko zekhanda kanye nezikhulumi. Iqukethe ikhibhodi enkulu ngokuvamile okungenani ama-octaves amahlanu. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi udlale izingoma ngakwesokudla nangezinkinobho ngakwesobunxele. Izinhlobonhlobo eziphansi ezithengisiwe zikhulu kubantu abasha, abasebenzisa lezi zinsimbi zekhibhodi ukuze bathole indlela yokudlala kumculo. Lezi zingoma zomculo zezingane zivame ukuba nezinkinobho ezinobungane. Zibuye zihlotshwe ngombala we ukunambitheka kwentsha.
Ukuze uphumelele, ikhibhodi iqukethe okhiye abakhulu nezikhulumi ezinekhwalithi yezwi elihle kakhulu. Ukuhlukahluka okuningi kunezinhlobo eziningi nemisindo. Ngisho nokulawula okucacile nezinketho eziningi zokuxhumeka kunikezwa nale nsimbi yekhibhodi.
Amakhibhodi abadlali abadlali ababa nawo okhiye ngemuva kokulandela. Ngezici zalo zokuhlela zomsindo, imiphumela eminingi eyengeziwe kanye nezinketho zokuzibandakanya bukhoma, zilungele studio noma zisebenzise bukhoma.
Abakhiqizi abahamba phambili
Esikhathini esibukeziwe esilandelayo, brand kanye nabakhiqizi abanezinkolelo eziningi bangatholakala phakathi kwabathengisi abahlukene bamakhibhodi.
Ngasekupheleni kweminyaka engu-70er uTim Ryan wakhuliswa nabafundi ababili ababengumunye wabafundi bokuqala be-digital synthesizers. Ngemuva kokusungula iMidmanman ku-1998, uRyan wagxila ezintuthukweni ezihlanganisa ama-MIDI namasignali alalelwayo nge-PC. Namuhla, le nkampani evela eMelika ikhiqiza ama-interfaces alalelwayo, amakhadi azwile, ama-headphone, imibhobho, Futhi amabhokisi amakhibhodi e-MIDI. Kusukela ku-2000, inkampani ibizwe nge-M-Audio.
Kakade i-1889 yasungulwa le nkampani evela eJapane ngu-Torakusu Yamaha. Eminyakeni emibili ngaphambili, wathola umyalelo wokulungisa i-harmonium. Ngenxa yokuthi wayegqoke ukwakhiwa kwalesi sixhobo somculo, wanquma ukuthi uzokwakha lesi sixhobo ngokwakhe. Kakade ngonyaka we-1899 inkampani nayo yakhiqiza ama-pianos amakhulu nama piyano. Eminyakeni engu-36 kamuva, ukuqaliswa kwalesi sigaba sokuqala se-electromechanical kusuka ku-Yamaha kwenzeke. Eminyakeni ye-70er le nkampani ithuthukise ama-pianos kagesi nama-synthesizers. Ekuqaleni kweminyaka eyi-80, i-Yahama inikeza ikhibhodi esebenzise ngempumelelo okokuqala i-FM, ukudala umsindo weyishumi. Namuhla Yahama inkampani efakwe ohlwini.
U-1987 waqala uKlaus Kirstein eSchongau ngesitolo esincane sezinsimbi ezihlukahlukene. Indlu yomculo uKirstein yavula i-webshop futhi yazisa imikhiqizo ehlukile. I-FunKey ingumkhiqizo wale bhizinisi lomculo. Ithengisa amakhibhodi wabaqalayo.
U-Tadao Kashio wasungula i-1946, inkampani yaseJapan eyakha ama-calculator-mechanical mechanical, ama-crystal and digital calculators. U-1981 unikeze ikhibhodi yokuqala yenkampani ebizwa nge-Casiotone 201. Namuhla, i-Casio inikeza izinsimbi eziningi zekhibhodi kuwo wonke amanani wamanani. I-Casio inekhibhodi enezinkinobho ezikhanyisiwe zabaqaphi. Lokhu kuwusizo olukhulu kubafundi abadlala lezi zinsimbi zomculo.
Abakhiqizi abalandelayo banikeza amakhibhodi ngezinhlobonhlobo ezahlukene ngokusebenzisa izitolo zezobuchwepheshe kanye nama-webshops:
- Magic singing
- Streetlife Music
Kusuka lapho ikhibhodi ukudlala ukufunda kungenzeka
Kungakhathaliseki ukuthi usemusha noma omdala, wonke umuntu angaqala ukudlala ikhibhodi. Uma kuziwa ezifundweni zomculo ezisebenzayo, kubalulekile ukunaka izinto ezimbalwa. Izingane ezisencane kufanele zifunde ikhibhodi kuphela uma ziya esikoleni. Empeleni, izingane azivunyelwe ukufunda umculo ngaphambi kwesikole ngoba lokhu ukucabanga okungacacile akusho ukuthi kuvuthiwe njengabantu abadala. Uma intsha iyenze umculo ngaphambi kokubhalisa, ingahlala ifunda ukudlala ikhibhodi kamuva. Kumele kuqashelwe ukuthi ingane ngayinye ifunda ngokuhlukile futhi ngezinga elihlukile. Ngakho kubalulekile ukuthi ungayilinganisi nakwabanye ofunda nabo abadlala nayo ikhibhodi. Kubalulekile ukuthi ukudlala le nsimbi nakho kujabulise. Uma ufuna ukufunda ithuluzi eliyisihluthulelo njengomuntu omdala, kufanele ukwazi ukubuka futhi uphendule uthisha womculo oseduze nekhaya lakho noma kwi-intanethi. Ukuze izifundo zomculo zisebenze kahle, kubalulekile ukuthatha isifundo sokuhlola ukuze ubone ukuthi ungayisingatha uthisha.
Ukuqhathanisa okuwusizo okungaphezulu kungatholakala kithi Ikhibhodi ye-Guides.
I-RockJam 54-key ikhiyano yekhibhodi yepiyano enamathelayo isitikha samandla womculo oma kanye nokukhonjiswa kwesicelo sopiyano okulula
Le piano yekhibhodi ye-RockJam inezikhiye ezingama-54 usayizi ogcwele ezinikeza le ikhibhodi uzizwe yendabuko.
I-compact futhi iyaphatheka, i-RockJam 54 pianos pianos can be powered by any betri and AC power (Power Power afakiwe) ebenza bakulungele ukusetshenziswa ekhaya nasemgwaqweni.
Izikhulumi ezimbili zestereo ezakhelwe ngaphakathi zinikeza ikhwalithi yomsindo enhle ekuvumela ukuthi uqaphele umkhuba wakho nokusebenza kwakho.
Isitebele somculo sisekelwa kahle kumadivaysi omculo we-sheet noma e-tablet ukuze ukwazi ukufunda umculo noma ukulandela izifundo njengoba udlala.
Ukufinyelela okuyingqayizivele kokuqukethwe ngaphakathi kohlelo lwe-Simply Piano lwesicelo sobabili be-IOS namadivayisi we-Android ukusekela abadlali bepiano bekhibhodi abancane nabadala.
Ikhibhodi ye-Yamaha PSR-F51 Yedijithali, Imnyama - Elula futhi lisebenziseka kalula ithuluzi lokuqala eliphezulu lomsindo nezitayela ezihambisana nazo - Ikhibhodi eneModi ye-Duo yokubonisa isidlali se-2
I-PSR-F51 ilula futhi ihlangene nephaneli yayo yokulawula enembile, izinkinobho zesayizi ejwayelekile & imisebenzi eyisisekelo yekhibhodi - ifanela ikhibhodi yokuqala yezingane nabadala
I-PSR-F51 kulula ukuyisebenzisa ngesibonisi - vele ukhethe imisindo yensimbi kanye nesitayela esihambisana nayo uma usuhamba!
Ikhibhodi yokuqalisa ephathekayo icacile, ayinasisekelo futhi ingasetshenziswa nebhethri - vele uyithathe noma kuphi futhi ujabulele imisindo yensimbi eyiqiniso nezitayela ezihambisana nazo ezivela kuwo wonke umhlaba
Insimbi yomculo ye-61-groovy enezici zayo eziningi njenge-120 Instrument Sounds, Preset Dual Voices, Metronome, Mode for 2 Player & 144 Stompaniment Styles, inikeza injabulo enkulu ekwenzeni umculo
Ububanzi bokuphakelwa: I-1 x ikhibhodi yedijithali evela kuYamaha, incl. Amandla okuhambisa, isixhumi sokukhipha i-headphone, imiyalo nezikhulumi
Ikhibhodi ye-RockJam 61 ikhiyano yepiyano isetha ukhiye wama-61 wekhiphedi wekhibhodi ebhentshini ikhibhodi ukuma kwe-headphone ukuxhasa izisekelo zesicelo se-pial esisetshenziswayo nesilula.
I-RockJam 761 Ikhibhodi ye-Piano Super Kit ifaka ikhibhodi edijithali enesayizi egcwele enezikhiye ezingama-61 ikunikeza ukuthi upiyano wendabuko uzizwe ngenkathi ugcina ukwakheka okuphathekayo nokuyinto compact enganikezwa amandla noma ngamabhethri amakhulu.
Le piyano yekhibhodi ye-RockJam 761 inepaneli yokubonisa ethinta ebonisa izimpendulo futhi ifaka izingoma ezingama-200, amathoni angama-200, umsebenzi wokufundisa nezingoma ezingama-30 zedemo eziyingxenye yokusebenza kwayo.
Upiyano lwekhibhodi ye-RockJam 761 lunokuqoshwa nokusebenza kokuvumela ukuvumela izingqimba zakho ukwakha umsindo wakho nokuphuma kwe-MIDI kuhlanganiswe nendawo yakho yokusebenza komsindo yedijithali njenge-Ableton neLogic ngentambo eyodwa.
Le iphakheji yekhibhodi yepiyano super kit iqukethe ikhibhodi eme ngokuqinile ekwakhiweni futhi ingahambelana nabadlali abasha nabadala bekhibhodi yepiyano.
Le ikhibhodi yepiyano ikhibhodi enkulu ifaka isihlalo esigoqiwe esisongeka kalula futhi sinesihlalo esikhulu esigoqiwe amahora amaningi wokudlala ngokukhululeka.
Ikhibhodi yemidlalo yeLogitech G213 Prodigy, ukukhanyisa i-RGB, okhiye be-G abangahlelwayo, izilawuli zemultimedia, ukuphumula kwesandla okuhlanganisiwe, ukufafazwa kwe-Splash, ukuhlelwa kwe-QWERTZ yaseJalimane - ukubukisa okumnyama
Ikhibhodi yemidlalo enezindawo zokukhanyisa ze-RGB: Le ikhibhodi yeLogitech inikeza izindawo zokukhanyisa ezihlukene ezinhlanu ngokukhethwa kombala kusuka kunqwaba yemibala engaphezu kwezigidi eziyi-16,8
Ezezindlu: Ikhibhodi yemidlalo esezingeni eliphakathi enezindlu ezinqenqemeni, evikela ukungcola, imvuthuluka nezihlakala, kulula ukuyihlanza - inhlanganisela efanele yegundane lokudlala
Izinkinobho ze-Mech Dome: Nikeza ukusebenza okuqhathaniswa namakhibhodi wemishini uhlanganise nokuziphatha okuhle kakhulu kwethalente nokusebenza okunamandla
I-anti-ghosting matrix yokudlala: Ukusebenza kahle komdlalo ukugcina ukulawula lapho ucindezela izinkinobho zokudlala eziningi ngasikhathi sinye
Izilawuli ezikhethekile zemultimedia: Ukulawula umculo wangemuva ngaphandle kokuphazamisa umdlalo, futhi nokudlala, ukumisa isikhashana nokuguqula izingoma namavidiyo
I-Apple Smart Ikhibhodi (ye-12.9-intshi i-Pro Pro - isizukulwane sesine) - Isibonisi saseJalimane
I-Smart Keyboard Folio ye-12,9 "I-iPad Pro ikhibhodi enesayizi egcwele uma uyidinga.
Futhi uma kungenjalo, isivikelo esihle sangaphambi nangemuva esikuvumela okuhlukile kuma-engela wokubuka.
Mane ubeke i-iPad Pro kukhibhodi bese uqala ukuthayipha, ngaphandle kokushaja noma ukubhangqa.
Ikhibhodi ye-Apple Magic ene-Numeric Keypad - IsiNgisi - Isikhombi se-Space Grey
Ikhibhodi Yom Magic ene-Numeric Keypad inesakhiwo esithuthukisiwe nezinkinobho zokuhamba ngokuzulazula kwedokhumenti okusheshayo kanye nezihluthulelo zomcibisholo wesayizi ogcwele
I-scissor mechanism ngaphansi kwekhi ngayinye ithuthukisa ukuzinza okukhulu nokulungiswa kwesiphrofayili esiphezulu ukuze uthole isipiliyoni esicacile nesicacile sokuthayipha
Ikhiphedi yezinombolo iphinde ikwazi amaspredishithi nezinhlelo zezimali
Futhi ngebhethri ekhishiwe ekwakhiweni, inamandla amakhulu kakhulu futhi ihlala inyanga noma ngaphezulu ngaphambi kokudinga ukuyilayisha kabusha
Ikhibhodi ye-Apple Magic - isibonisi saseJalimane
Ikhibhodi Yom Magic ihlanganisa umklamo omuhle ngebhethri ekhishwe ngaphakathi futhi nemisebenzi eyinhloko esemqoka
Indlela evuselelwe ngayo izikali zandisa ukuzinza kwekhi ngayinye futhi yenza ukunyakaza kwazo kuphumelele ngokwengeziwe
Kanye nephrofayli ephathekayo, ukuthayipha okuqondile kwikhibhodi yobu Magic kuba mnandi futhi kulula
Ixhuma ngokuzenzakalelayo ku-Mac yakho futhi ilungele ukusebenzisa
Futhi ngokuphila kwayo kwebhethri eside kakhulu, ungayisebenzisa cishe inyanga noma ngaphezulu ngaphambi kokuthi uyikhokhise
siphoI-Bestseller cha. 9
I-AKAI Professional MPK Mini MKII - Isilawuli sekhibhodi esisebenzayo sekhibhodi ye-25 MIDI ye-MIDI enamaphakethe ayi-16 asebenza ngokusemandleni, izilawuli ezi-8 ezinokubekelwa i-Q-Link kanye ne-4-way isithupha senjabulo
Uhlobo lwe-USB-MIDI olunezikhiye zesenzo ezingama-25 ezihambelana ne-vethity-sensitive, zombili izinkinobho ze-octave phezulu nezikhiya phansi, ukwandisa ikhibhodi ebangeni eligcwele
Induku yesithonjana sendawo emine yokulawula okuguquguqukayo kanye nokulawulwa kokushintshashintshwa kanye ne-arpeggiator eyakhelwe ngokulungiswa okuhlengahlengiswayo, ibanga nezindlela
Idizayini eqinile futhi icwecwe ngogesi wamandla we-USB ukuze ukwazi ukukhiqiza umculo noma kuphi
Amapads ayisishiyagalombili abukhali we-velocity ekhanyayo ngesitayela seMPC ngenothi ephindaphindwayo kanye nezinga eligcwele lemigqomo yokuhlela, amasampula okubangela nokulawula amathuluzi wangempela / imisebenzi ye-DAW
Izilawuli eziyisishiyagalombili ezabiwe ngokukhululekile ze-Q-Link zokuxuba, nokwenza kahle ama-plugins nokunye okuningi
Ikhibhodi ye-Yamaha YPT-260, emnyama - Ikhibhodi yokuqala yokuguquguquka enezikhiye ze-61 nemisebenzi eminingi yokufunda - Ikhibhodi ye-e-ephathekayo ebonakalayo
Umculo wangempela, ubumnandi bangempela: Ikhibhodi ye-Yamaha's YPT-260 ikwenza ukuthi ukufunda kube nomoya - nokufunda okuhlukahlukene kanye nemisindo yensimbi, insimbi ilungele abaqalayo
Funda ukudlala ikhibhodi kulula ngezici zokufunda zangaphakathi ze-Yamaha Education Suite nezindlela zokulalela, zokubekela isikhathi nezokulinda
Umsindo ofanele uhlala unokwenzeka: umsindo osezingeni eliphezulu wamakhibhodi weYamaha angashintshwa ngokushesha futhi kalula ngemiphumela yedijithali & Master EQ
Ubumnandi obukhulu ngezinkinobho ze-61, imisindo ephezulu ye-385 nezitayela ze-100 zokuhambisana - noma xhuma ucingo olunomsindo ngechweba le-AUX bese udlala izingoma zakho eziyizintandokazi
Kufakwe ekulethweni: I-1 x ikhibhodi yedijithali evela kuYamaha, incl. Ukuhlinzekwa kwamandla, okokufaka okulalelwayo, i-headphone jack nemiyalo / Esezingeni elifanele kubaqalayo - noma ngabe badala noma izingane / kulula futhi ziyaphatheka
Isihloko sangaphambiliniihluzo Amakhadi